Miresaka momba ny fiainana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Indray tolakandro mafana dia niasa tao amin'ny tanimboly paoma niaraka tamin'ny raibeko tamin'izaho mbola zatovo. Nangataka ahy izy mba hitondra azy ny siny misy rano mba hisotroany lava an'i Ale's Adam (izay midika hoe rano madio). Izany no endriny feno voninkazo ho an'ny rano mangatsiaka. Toy ny rano madio mamelombelona ara-batana, ny Tenin'Andriamanitra dia mamelombelona ny fanahintsika rehefa miofana ara-panahy isika. Jereo ny tenin'i Isaia mpaminany: «Satria ...
Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Anisan'ireny olona tena tadidiko io i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Rehefa nihaona an'i Jesosy izy dia nandalo ...
Tsy hohadinoiko mihitsy ny valin-teny nomen’i Susan vadiko rehefa nilaza taminy aho fa tena tiako izy ary azony sary an-tsaina ny hanambady ahy. Eny hoy izy, nefa tsy maintsy mangataka alalana amin-drainy aloha. Soa ihany fa nanaiky ny fanapahan-kevitray ny rainy. Ny fiandrasana dia fihetseham-po. Miandry fatratra ny hisian'ny hetsika tsara ho avy izy. Niandry tamim-pifaliana ihany koa izahay ny andro fampakaram-bady sy ny fotoana ...
Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. The ...
Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ny eny toa ny ray aman-dreny hafa ianao dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa: ...
Ny ankamaroan'ireo izay mihoatra ny 50 mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Lehilahy manana loko marevaka sy mahery vaika izay, tamin'ny maha-mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, no nitifitra ny kirarony teo amin'ny podium izy rehefa niresaka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Fantatra ihany koa izy raha ny fanazavany fa ny olombelona voalohany tany anaty habakabaka, ilay cosmonaut Rosiana Yuri Gagarin dia "nitsambikina tao anaty habakabaka fa tsy nahita andriamanitra tao". Ny amin'i Gagarin tenany ...
Tena mahagaga tokoa raha nampirisika azy i Martin Melanchthon, Martin Luther tamin'ny taratasy iray: Aoka ianao ho mpanota ary avelao ny herin'ny ota fa lehibe kokoa noho ny ota ny fahatokisanao an'i Kristy ary mifaly amin'i Kristy fa mpanota. nandresy ny fahafatesana sy izao tontolo izao. Raha vao jerena dia toa tsy mampino ilay fangatahana. Mba hahatakarantsika ny fampitandreman'i Lotera dia mila mijery akaiky ny teny manodidina ianao. Tsy midika hoe ota i Lotera ...
Nisy mpampianatra mpanakorontana iray novonoina teo amin’ny hazo fijaliana teo amin’ny havoana lo eo ivelan’i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no mpanakorontana tao Jerosalema tamin’io andro lohataona io. “Voahombo niaraka tamin’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana aho”, hoy ny nosoratan’ny apostoly Paoly (Gal 2,20), fa tsy i Paoly irery. “Niara-maty tamin’i Kristy ianareo”, hoy izy tamin’ny Kristianina hafa (Kol. 2,20). Nanoratra ho an’ny Romana izy hoe: “Nalevina niaraka taminy isika” (Rom 6,4). Inona no mitranga eto…
Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia voajinjana mba hanaovana divay mandritra ny an'arivony taona maro. Dingana iray feno izany satria mila tompona sela za-draharaha, ny tany tsara sy ny fotoana tonga lafatra. Ny voaloboky ny tanimboaloboka ary manadio ny voaloboka ary mijery ny fahamasinan'ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina amin'ny fijinjana. Misy asa mafy ao aoriany, fa raha mifanaraka ny zava-drehetra, dia ilay ...
Tsy rariny izany!" – Raha nandoa vola isika isaky ny mandre olona miteny izany na miteny izany ny tenantsika dia mety hanankarena isika. Entam-barotra tsy fahita firy ny rariny hatramin’ny niandohan’ny tantaran’ny olombelona. Vao tany amin'ny akanin-jaza, ny ankamaroantsika dia nanana traikefa nampalahelo fa tsy rariny foana ny fiainana. Noho izany, na manao ahoana na manao ahoana lolom-po, dia mampifanaraka, mamitaka, mandainga, misoloky...
Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Mazava foana izy na dia rehefa misy hamaly ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" Tiako manokana ny toerana iray izay ...
Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana iainantsika ao anatin'ny tontolon'ny postmodern. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, dia ilay "mpanorina", "boomer", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" ...